सुनकाे भाउ दिनहुँ सोच्नै नसक्ने गरि घट्न थाल्याे, तोलामा कतिसम्म आइपुग्ला ? – Namaste Host
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सुनकाे भाउ दिनहुँ सोच्नै नसक्ने गरि घट्न थाल्याे, तोलामा कतिसम्म आइपुग्ला ?
सुनको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । लगातार ओरालो लागिरहेको सुनको भाउ आज पनि तोलामा रु ९०० ले घटेको छ । स्थानीय बजारमा आज छापावाला सुन रु ९०० ले घटेर तोलामा रु ८५ हजार ६०० भाउ निर्धारण भएको छ । छापावाला सुन बिहीबार तोलामा रु ८६ हजार ५०० मा कारोवार भएको थियो । यसैगरी तेजाबी सुन तोलाको रु ८५ हजार १५० मूल्य निर्धारण भएको छ ।
तेजाबी सुन बिहीबार तोलामा रु ८६ हजार ५० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा रु ३५ ले घटेको छ ।तोलामा रु एक हजार २८५ मा बिहीबार कारोवार भएको चाँदी आज भने रु एक हजार २५० भाउ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अन्य समाचार : सियोनाको उपचारमा अभिनेत्री परमिताले गरिन् ६० हजार सहयोग सियोना बचाउ अभियान चलेको धेरै भैसक्यो । उक्त अभियान हालसम्म पनि चलिरहेको छ । उपचारको लागि २५ करोड नेपालि रुपैयाँ चाहिने भएपछि नेपालिहरु लागिपरेका छन् । जसमा नेपाली सेलिब्रेटिहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । केहिले आफ्नो सामाजिक संजालमा हेल्प पोस्ट गरेर सहयोग गरे भने केहिले आफ्नो कमाईको केही भाग छुट्याएर आर्थिक रकम नै सहयोग गरे । यस्तैम अभिनेत्री परमिता आरएल रानाले पनि आर्थिक सहयोग सियोनाको ममिलाइ हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
जस्को एकाउन्ट नम्बर 206500000031524 रहेको छ । यस्तै, ईसेवाबाट आर्थिक सहयोग गर्नको लागि 9816457809 र 9847206466 आईडी प्रयोग गर्दै सियोन बचाउ अभियानमा साथ दिन सक्नुहुनेछ छ । यस्तै खल्ती एप प्रयोगकर्ताहरुले भने खल्ती भित्रको ‘Bazaar’ भन्ने अप्सनमा गई ‘Donation for Siyona Shrestha’ सर्च गरेर आफुले चाहेको रकम पठाउन सकिनेछ भने www.gofoundme.com मार्फत पनि सहयोग रकम पठाउन सकिनेछ । डिथ्री अनलाइन सियोनको जीवन रक्षाको कामना गर्दछ